Mogadishu Journal » Shirkii IGAD ee abaaraha oo lasoo geba gebeeyey
Mjournal :-Dalalka Geeska Afrika ayaa dadaal ug jira sidii loola tacaali lahaa mushkiladda abaaraha ku soo noqnoqda gobolka, oo hadda laga cabsi qabo inay saameeyaan ilaa iyo 15 milyan oo qof.
Dadkaaas ayaa ku nool, Somalia, Kenya iyo Ethiopia, waxaana la isku dayayaa sidii loo xoojin lahaa awoodda ay dadkaas u leeyihiin u adkeysiga aafooyinka.
Shir muddo shan maalmood ah ka socday magaalada Nairobi oo ay lahaayeen dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, kaasi oo looga hadlayey ka hortagista abaaraha, ayaa maanta halkaasi lagu soo gabagabeeyay.
Shirkaan ayaa qodobadda laga soo saaray waxaa ka mid ah in la xoojiyo taageerada la siiyo dalal ay ka mid tahay Soomaaliya si loo Sare loogu qaado adeegyadda looga hortagi karo Abaaraha.
Maxamed Cumar Nuur, oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Soomaaliya oo shirka ka qeyb galay ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo bandhigtay sidda ay Abaaruhu u samaayeen.